Ny iPhone 11 dia manana fiampangana miverina saingy kilemaina | Vaovao IPhone
Luis Padilla | | iPhone 11, About us
Iray amin'ireo fahadisoam-panantenan'ny minitra farany ho an'ny maro izany. Rehefa afaka volana maro niresaka momba ny fomba mety hananan'ny iPhones vaovao rafitra famerenana amin'ny laoninyToy ny telefaona finday avo lenta sasany, 24 ora monja talohan'ny nanehoana ireo finday avo lenta vaovao an'ny Apple, dia niely ny feo fa mety nesorin'ny orinasa ity endri-javatra ity.
Eny, raha ny tsiliantsofina azo antoka, ilay iPhone 11 vaovao amin'ny faritra rehetra ao aminy mety ahitana fitaovana famerenana amin'ny laoniny, saingy mety hosakanan'ny rindrambaiko. Midika ve izany fa afaka manavao azy amin'ny fotoana rehetra i Apple?
Amin'ity taona ity ny olona ao amin'ny iFixit dia hanana asa bebe kokoa noho ny mahazatra. Ho an'ny tsy fantatra momba ny fahatsiarovana RAM dia mila manampy ny enta-mavesatra isika izao. Ity rafitra ity dia hamela fa, amin'ny fametrahana fitaovana mifanentana ambonin'ilay sary famantarana paoma, dia averina ampiasaina indray amin'ny alàlan'ny batterin'ny iPhone io. Ny tsaho dia nanondro hatrany ny AirPods na Apple Watch ho fitaovana tsara indrindra ho an'ity karazana recharge ity, ho an'ny bateria "kely". Fampiasana efa ananan'ny telefaona sasany toa ny "hain-tsarin'i" Samsung izy io, saingy tokony ho notantanan'ny Apple tamin'ny minitra farany izy, namela ny iPhone 11 niaraka tamin'ireo singa ilaina rehetra hanaovana izany saingy tsy nisy ny rindrambaiko marina. Mandra-pahatonga ny iFixit hampiseho amintsika ny faharavan'ny iPhone vaovao dia tsy ho azontsika antoka ny maha azo antoka an'ity tsaho ity.
1 Fa maninona no esory ity fampiasa ity?
2 Azon'i Apple atao ve ny mampandeha ity fampiasa ity?
Fa maninona no esory ity fampiasa ity?
Ming-Chi Kuo no nilaza voalohany fa tsy hahatratra ireo iPhones vaovao io fampiasa io, ary 24 ora fotsiny vao nanambara ireo maodely vaovao i Apple. Ny famokarana singa iPhone sy ny fivorian'ny iPhone dia maharitra herinandro maromaro, ka raha fanapahan-kevitra noraisina tamin'ny ora farany dia efa tsy azo atao intsony ny miverina manala ireo singa ireo. Inona no mety nahatonga an'io fihetsika io? Raha ny voalazan'i Ming-Chi Kuo, ny antony dia tsy voahaja ny fenitra avo lenta an'ny orinasa. Ho sarotra ny hahafantatra ny antony, fa mety ho avy amin'ny fiakaran'ny maripana be loatra izay mety hisy fiantraikany amin'ny iPhone, hatramin'ny fihenan'ny fahasalaman'ny bateria.
Azon'i Apple atao ve ny mampandeha ity fampiasa ity?
Toa sarotra be ho an'i Apple ny mamoaka fanavaozana mamela io fampiasa io, indrindra rehefa dia tsy nanonona an'ity endri-javatra ity na oviana na fotoana ao anatin'ny adiny roa aorian'ny fampidirana iPhone. Tsy vao sambany no nanambara Apple fa misy fampiasa amin'ny findainy izay hiandry ny famelana azy, fa ny talata lasa teo tsy nisy na inona na inona voalaza momba an'io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 11 » Ny iPhone 11 dia manana famerenana amin'ny laoniny saingy tsy mandeha izy io